बुधवार, भाद्र ६, २०७५
वैयक्तिक गोपनीयताको दायरा बढ्यो
बिमस्टेक महासन्धि संसदमा पेश
बकर इदको शुभकामना.
काठमाडौँ, भदौ २९ गते । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । बुधबारको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका तीन मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्चमा अहिले चार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । सर्वोच्चमा सिफारिस हुने न्यायाधीशहरूमा बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तान हुनुहुन्छ । परिषद् सचिव राजन भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो– ‘उच्च अदालतका तीन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ, जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा भएको छ । ’
श्रेष्ठ उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यस्तै, शाही उच्च अदालत सुर्खेत र मोक्तान उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तीनै न्यायाधीशको नियुक्ति भएमा सर्वोच्चमा एक दरबन्दीमात्र रिक्त हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जनासम्म न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था छ । हाल प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चमा १६ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायी र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट दुई/दुई जना न्यायाधीश सर्वोच्चका सिफारिस गर्ने गृहकार्य भए पनि अन्तिम समयमा उच्च अदालतबाट तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो ।
परिषद्को सिफारिस अनुसार अब न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइका लागि न्याय परिषदले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गर्नेछ । परिषद्को पत्राचारपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । प्रस्तावित न्यायाधीशउपर समितिले उजुरी आह्वान गर्नेछ । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेमा समितिले उजुरी अध्ययन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक नठानेमा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । समितिको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत हुन सक्नेछन् । तर, स्वीकृतिका लागि भने सामान्य बहुमत भए पुग्नेछ । समितिले सुनुवाइको जानकारी न्याय परिषदलाई दिनेछ । समितिको जानकारी पत्रअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र शपथ हुनेछ ।
जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा
यस्तै परिषदको बुधबारको बैठकले १९७ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । सरुवाको पहिलो नम्बरमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले हुनुहुन्छ । हाल प्रदेश २ को निर्वाचनमा रहेका न्यायाधीशहरूको पनि सरुवा भएको छ । तर, उहाँहरूको सरुवा निर्वाचन कार्य सम्पन्नपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
काफ्लेलाई मनाङबाट दोलखा जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । यस्तै, न्यायाधीश धर्मराज पौडेललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अछाम पठाइएको छ । काठमाडौँकै न्यायाधीश हेमन्त रावललाई दाङ जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ । दाङका चुरामन खड्कालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ल्याइएको छ । काठमाडौँकै कृष्णमुरारी शिवाकोटीलाई कालिकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै, श्रीप्रसाद सञ्जेललाई रूपन्देहीबाट सप्तरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ । अम्बिका निरौलालाई झापाबाट काठमाडौँ सरुवा गरिएको छ । डा. रमेशकुमार रिजाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको काजबाट डडेलधुरा जिल्ला अदालतका सरुवा गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।